Tilmaame si loogu habeeyo Gnome-Fallback sida Gnome 2 ee Ubuntu 11.10 | Laga soo bilaabo Linux
Tilmaame si loo habeeyo Gnome-Fallback sida Gnome 2 ee Ubuntu 11.10
Dmitry Shachnev ayaa u qoray hage yar oo xiiso leh kuwa isticmaala Ubuntu maxaad rabtaa inaad ka gudubto Midnimada oo raba inay yeeshaan wax la mid ah wixii ay ku dhex jireen Ubuntu 10.10 (oo leh Gnome2) tusaale ahaan.
Waxaa haboon inaad fiiriso maxaa yeelay natiijada waxay noqon doontaa wax sidan oo kale ah:
Wixii aan ka arki karay, waxa uu qoraagu sameynayo ayaa ah in waxyaabo qaar lagu daro Gnome-dib u dhac iyo natiijada aragtidayda waa mid cajiib ah: Astaanta Ubuntu ee ku taal menu-ka, asalka gudiga oo leh dulucda ah Ammaanka, Tartamaysa iyo calamada Ubuntu sidii oo kale Gnome 2.
Maxay kula tahay Waxaad ka arki kartaa hagaha gudaha xidhiidhkan.
Lagu arkay Webupd8
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Tilmaame si loo habeeyo Gnome-Fallback sida Gnome 2 ee Ubuntu 11.10
laakiin kumbuyuutar kuma dari kartid tufaax guddigaas (ma awoodaa?)
Haa, haa waad awoodaa: badhanka alt + jiirka midig guddiga. Tani waxay dhaqaajineysaa menu-ka macnaha guud ee «ku dar guddiga, guur, ka saar guddiga ...».
Sidoo kale waa ansax in saacadda loo wareejiyo dhinaca midig: badhanka alt + jiirka midig saacadda waxaana na tusi doona ikhtiyaarka lagu dhaqaajin karo tufaaxaas.
Waad salaaman tahay, ka faallood in gnome-fallback uguyaraan 3.2 lagu ridi karo gnome. Iyada oo leh tufaax iyo wax walba. Waxaa lagu tijaabiyay debian, qaabku waa kuwan soo socda si loo riixo furaha alt ka dibna badhanka midig ee jiirka baarka. Sidii hore, kaliya waa inaad riixdaa furaha alt, waxay horeyba u arkeen in laga tagay sidii hore iyadoo aan laheyn fure alt tan iyo tan ama tirtir Haddii aad rabto shaashad shaashad ah, waan soo diraa laakiin ma aqaan sida.
Haa, laakiin wax yar oo fool xun, kuwa kale ma aanan isku dayin, laakiin dareemayaasha tufaaxa, midabka cawl ee asalka madow, macno badan ma sameyneyso, waxaan u maleynayaa in lagu habeyn karo meel, dookha dareemayaasha maya
Sikastaba, desktop wali waxba kama buuxin karo
gnome wuxuu lumiyay dhammaan adeegsiga uu lahaa, wax walbana way sii adkaanayaan, qofna ma diidi karo taas
waan la joogayaa xfce
Taasi marwalba way shaqeysay tan iyo markii Gnome soo baxay, waxa dhaca ayaa ah in yar oo ogaa 😀
Waad salaaman tahay, dejinta mawduucyada iyo astaamo dulsaarida miiska wali ma aqaano sida loogu sameeyo dib u dhaca gnome qaab fudud. Khiyaanada aan u adeegsado waa iyada oo loo marayo qalabka gnome tweak oo leh qolofta gnome, waxaan badalayaa dulucda iyo wax kasta oo kale waxaanan dib ugu laabtaa dib u dhaca gnome. Mawduuc wanaagsan oo taageera gtk2 / gtk3 waa Evolve.
Waxaan horay u siiyay sida si fudud loogu beddelo dulucda iyo astaamaha ku jira gnome fallback. Ku rakib dconf-tifaftiraha, ka dibna waxaan u soconaa inaan bilowno / system tool / dconf editor, org / gnome / desktop / interface, oo bedelno astaamaha iyo mowduucyada.
Waan ka xumahay, xirmada la rakibayaa waa qalab dconf-qalab ah
Sida loo abuuro meel gaar ah ArchLinux repos si guriga loogu qaado
La wadaag qaabkaaga Conky